Saripika : ‘Theyyam’, Fetin’ireo Andriamanitra Any Kerala Any India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2014 4:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Português, Ελληνικά, English
Vishnumoorthi ao amin'ny Narikode. Sary avy amin'i Shaji Mullookkaran, nahazoana alàlana
Rehefa miditra anaty ririnin'ny volana Novambra ny faritr'i Kerala, faritra amorontsirak'i India, dia manomboka ny fetiben'ny Theyyam, fomba amam-panao nentim-paharazana any Kerla Avaratra sy ireo faritra manodidina. Fantatra amin'ny dobok'ampongany, ny dihin'ireo indizena ary ny tantara mahafinaritra, ary tanterahina any amin'ny fiangonana maherin'ny arivo izy io.
Ny sokajin'olona ambany ao amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny no mandray anjara amin'ny Theyyam ary mitantara ny habibian'ny rafi-piarahamonina sy ireo sokajin'olona ambony ireo tantara sy hira rehetra. Fisehoan'Andriamanitra ao amin'olombelona tsotra rehefa mihidy ny varavaram-be rehetra ny fomba amam-panao Theyyman, amin'izay mahazo fahefana amin'ireo sarin'andriamanitra izy (lahy na vavy).
Tantarain'i William Dalrymple ao amin'ny boky mandresy lahatra “Nine Lives“, (Fiainana Sivy) ny momba ny fiovan'ny olona ho andriamanitra ampahany amin'ny fotoana fanombohan'ny Theyyam :
Mandritra ny fotoanan'ny Theyyam ihany izany- ny volana Desambra hatramin'ny Febroary. Ilaozanay ny asanay ary tonga mpanakanton'ny Theyyam izahay. Manjary andriamanitra izahay mandritra ireo volana ireo. Miova ny zava-drehetra. Tsy mihinana trondro na hena intsony izahay ary tsy mahazo miara-matory amin-dramatoa vadinay. Mitondra fitahiana ho an'ny tanàna sy ireo mponina ao izahay ary mandroaka ny fanahy ratsy. Fitaovana ahazoan'ny olona misaotra an'ireo andriamanitra noho ny valim-bavaka sy ny fahatanteran'ny faniriany izahay. Na dia Dalits (tsy azo kasihina) aza izahay dia miondrika eo anatrehanay manaja anay na dia ireo mpitondra fivavahana sokajin'olona ambony Namboodiri Brahamane aza ary milahatra mba hikasika ny tongotray.
Betsaka ireo tantara sy fikarohana momba ny fetiben'ny Theyyman fa mbola mijanona ho mistery ho an'ny olona ivelan'ny faritra ny fomba amam-panao nentim-paharazana. Amin'ny alina no anatanterahana ny ankamaroan'ny fomba amam-panao ary misy izay tsy azon'ny vehivavy jerena.
Na dia eo aza izany rehetra izany, dia hita any amin'ny haino aman-jery sosialy ilay fetibe. Alefan'ireo mpiserasera ao amin'ny Facebook amin'ny alàlan'ny tenifototra hoe NarikodeTheyyam2014 ny sary momba ny Theyyam. Nanoratra tatitra momba ilay hetsika ho an'ny tranokalan'ny fahitalavitra iray sy nanao ny sarin'ny sehatry ny fetiben'ny Theyyam i Animesh Xavier, mpanakanto sady mpampiasa ny Google +.
Nasain'i Shaji Mullookkaran, olona tia maka sary sady mpitoraka bilaogy, tao amin'ny Google+ ny olona mba hanaraka an-tsary ny Theyyam tamin'ity taona ity tany an-tanànany any Narikode, Kannur any Kerala, toy izay efa nataony taona vitsivitsy lasa.
Theyyam iray miseho ho andriamanibavy. Sary avy amin'i Shaji Mullookkaran, nahazoana alàlana
Olona roapolo na mahery kely eo ho eo, izay miasa aminà haino aman-jery sosialy no namaly ny fanasana ary niaraka tamin'i Shaji nankany amin'ireo fampisehoana lehibe sasany miaraka amin'ny fitaovana fangalana sary eny an-tànana. Ny vokatra dia sary mahafinaritra maromaron'ity tany maha-te hijery izay idinan'ireo Andriamanitra ity.
Kumar Upasana, izay monina any Koety fa niala sasatra kely tany Kerala no nanao ity tatitra an-dahatsary fohin'ny Puthiya Bagavathy Theyyam ity :
Seena Viovin, injenieran'ny solosaina, nanangona ireo sary avy amin'ny fomba fijerinà vehivavy :
Theyyam iray mitso-drano mpanara-dia iray. Sary avy amin'i Seena Viovin, nahazoana alàlana
Ireo mpanampy eo am-panomanana ny haingon'ny lohan'ny Theyyman. Sary avy amin'i Seena Viovin, nahazoana alàlana
Theyyam anankiroa mandihy ao amin'ny faritry ny tempoly . Sary avy amin'i Seena Viovin, nahazoana alàlana